Siria: Ity « Tafika Mahaleotena » Mihantsy Ny Fitondrana Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2011 12:27 GMT
Tany ambava-ady mihitsy ireo lehilahy ireto tao amin'ny manodidina an'i Ar-Rastan tamin'ny 27 septambra hatramin'ny 5 Oktobra. Ilay tanàna, any amin'ny 20 km avaratr'i Homs, vohitra lehibe ao afovoan'i Siria, dia lasibatry ny fanafihana mahevy vaikan'ny tafiky ny governemanta taorian'ny fitsoahana an-daharan'ny antokon-tafika roa. Andiany mandeha fiara manodidina ny 250, notohanan'ny angidimby, no nandray anjara tamin'ny fanafihana sy n y fanaovana savahao. Manatrika azy ireo, ireo miaramila niala an-daharana sy ny mponina mitam-piadiana, araka ny filazan'ireo vavolombelona. Niverina eo ambany fifehezan'i Damas n y tanàna taorian'ny fifandonana mahery vaika ary ny fitànana ireo olona 3.000 any amin'ireo trano sekoly sy fametrahan'entana taorian'ireny fifandonana ireny no isan'ny tena henjana indrindra nisy teo amin'ity firenena ity hatramin'ny niandohan'ny fitroarana.
Raha tsy zava-baovao loatra ny fisian'ny fanoherana mitam-piadiana ataonà mpanohitra vitsy an'isa, manakaiky ny 800 ireo olon'ny mpitandro filaminana no maty nandritra ny lohataona, araka ny nanmbaran'ireo ONG, Zava-baovao vao haingana ny fipongaran'ny fanoherana mitam-piadiana mivoaka avy any an-daharan'ireo tafika an-tanety.
Tany amin'ny faritr'i Deir-Ezzor, tanàna lehibe any andrefana, no nisedra ny tena fahatairany voalohany ny fitondrana. Faran'ny volana Jolay, taorian'ny famonoana manamboninahitra tanora maro tao amin'ny akademia miaramila ao Homs (sary henjana be), dia andiany miaraka amin'ny fiara mifono vy avy amin'ny diviziona faha-3 no nanampy ireo mpiala an-daharana tao Deir-Ezzor sy ny manodidina azy, nivezivezy mihitsy niaraka tamin'ny fiaran-dry zareo tao Al-Boukmal, eo an-tànan'ny mpanohitra.
Nandefa maika miaramila tohana i Damas. Taorian'ny fanelanelanan'ireo fianakaviana to teny tany amin'ilay faritra, izay mbola mandala ny kolontsaina ara-poko, nanaiky hamerina ireo fiara mifono vy ireo mpihoko rehefa nomena toky fa tsy hiharan'ny fanafihana ny tanàna. Fifanarahana izay tsy ela akory dia nohitsakitsahan'ny mpitondra, izay nanome baiko hanafihana. MAnodidina ny 100 no maty tamin'ny ady tao Deir-Ezzor, voadaroka baomba ny tanàna.
Io angamba no tena sorapiankohonana milaza ny fahaterahan'ny tafika siriana mahaleotena (ASL), izay ny fiforonany, nataon'ireo manampahefana mpihoko, dia nambara efa ho andro vitsivitsy tany aloha.
Tarihan'i Riad al-Assad (tsy misy ifandraisany amin'ny fianakavian'ny mpifehy), kolonely iray ao amin'ny tfika an'habakabaka, mialokaloka any Tiorkia amin'izao fotoana, milaza ho manana olona 10.000 amin'izao fotoana ny ASL, mitsinjara ho antokon-tafika 12 manerana ny faritry ny firenena. Ary milaza ho mifandray aminà manampahefana ambony anjatony amperinasa, vonona ny hanatevin-daharana. Raha toa somary natavezina ihany ilay isa, mitombo hatrany kosa ny tolo-tànana azon'ilay vondrona hatramin'ny fiandohan'ny volana, indrindra fa any amin'ny manodidina an'i Homs, izay ivon'ny revolisiona Siriana. Izay eken'ny fitondrana rahateo ny fahamarinany, amin'ny fanamelohana ireo fanafihana, saika efa ho isan'andro vaky, ataon'ny « vondrona mpampihorohoro ».
Zavatra namafisin'ny mponina iray tao an-tanàna, izay nilaza fa »tsy mahagaga intsony ny mahita; vao mangiran-dratsy, fiaran'ny mpitandro filaminana kila forehitra satria latsaka tanaty velam-pandrika nandritra ny alina». Fanafihana izay tondroina fa nataon'ny ampahany efa malaza avy amin'ireo mpihoko, ny katiba Khalid-ibn-al-Walid, tarihan'ny manamboninahitra iray fahiny tao amin'ny hery manokana: lehilahy an-jatony eo ho eo notsinjaraina ho vondron'olona 10 hatramin'ny 30 izay manomboka miseho vahoaka matetitetika.
Ny fisafidianana anarana, nalaina avy amin'ilay moske lehibe indrindra ao an-tanàna sy ny lehiben'ny tafika Mahomet izay nahazo an'i Siria, dia manamarika mazava fa “sunnites” ireo mpiala an-daharana ireo, na dia manjavozavo ihany aza ny momba ny tena tanjon'ilay vondrona, izay mijanona fotsiny amin'ny fanindriana ny hoe « sady tsy fikambanana no tsy hetsika manana endrika politika izy, fa aro riaka amin'ireo tafika manompo ny fitondrana. Miasa ho an'ny safidin'ny vahoaka izahay, izay arovanay ny hetahetany hanan fiainana malalaka sy mendrika ary ho amin'ny tetezamita mankamin'ny fitondrana sivily sy demaokratika»
Avy amin'ny lafin'ireo mpanohitra,raha toa nantsoina foana hoe fivadihan'ny tafika ny fanirian'izy ireo, misy elanelana tokony hapetraka ihany, ny hetaheta mandalon'ireo mpihoko te-hiaro tena sy ny firotsahana an-tsehatra eny an-kianja ataon'ireo miaramila tsy ampy fitaovana hiatrika ny fanahim-bibin'ny mpitondra.
« Na dia tsapantsika aza ny hetaheta handray fiadiana na hiantso fidirana an-tsehatry ny tafika, dia lavinay io fepetra io. Ny fanafangaroana ny resaka tafika amin'ny hetsi-panoherana dia handemy tsikelikely ny fahamboniana ara-moraly izay nanamarika ny revolisiona hatrany am-piandohany», hoy ny Komity mpandrindra avy ao anatiny ao Siria nampahatsiahy tamin'ny volana lasa, iray amin'ireo tambajotra isan'ny milina manodina ny hetsi-panoherana, mpikambana ankehitriny ao amin'ny Filankevi-pirenena Siriana. Nolanjalanjaina ny teny, nefa ho an'ireo mpanara-dia ny hetsika ho amin'ny fampiraisana sy ivondronan'ireo karazam-pinoana samihafa, ny fikisahana mankamin'ny fanoherana mitam-piadiana, hatreto, dia heverina ho zavatra mamoa-doza.
Hatramin'ny 14 Oktobra… sy ilay andro mahazatra ho fanetanana isan-kerinandro. Natolotra ho an'ireo “miaramila afaka”, izay, ny omalin'io, mbola avy niatrika tamin-kery ny tafi-panjakana tao Idlib (avaratra) sy Deraa (atsimo). Ady nahafatesana olona 25, araka ny tatitry ny Sampana Siriana ho Fanarahamaso ny Zon'Olombelona.
Ny Alatsinainy maraina, nanao fanafihana iray vaovao indray ny tafi-panjakana hamelezana an'i Al-Khalidiye sy Adouye, vohitra onenan'olon-tsotra ao Homs, nitifiran-dry zareo ny siniben-dranon'ireo fari-ponenana, araka ny ambaran'ny Tambajotram-Baovao Shaam